Golaha wakiillada Puntland oo canshuuro adag ku soo rogay kunteenaradda iyo badeecadaha kale ee ka yimaada Berbera – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta qaraar adag ka qaatay badeecadaha laga soo dejiyo dekedda Berbera ee gudaha soo gala iyagoo aan canshuur sare lagu dhufan iyo konteenarada laga soo dejiyo dekeddaas.
Waxay go’aamiyeen goluhu 500% canshuurta la saarayo badeecadaha ka yimaadda Berbera.
Ujeedada ay goluhu u qaateen go’aannadan ayaa lagu sheegay si aan loo curyaamin dhaqaalaha ganacsatada Puntland iyo dhinaca kale dhoofka iyo wax soo dejinta dekedda Berbera.
Wasaaradda maaliyadda ayaa toddobaadkii hore sheegtay in badeecadaha ka imanaya Soomaaliland ay ku kordhisay 200%. Balse ajandaha arrintan la xiriira oo golaha horyiilay ayaa maanta qaraarkan oo arrinta sii adkaynaya ka soo baxay.
Furitaanka Kalfadhiga 44raad ee baarlamanka ka hor ayaa arrinta la xiriira badeecadaha ka yimaada Soomaaliland iyo walaaca laga qabo waxay ku badnayd aragtida iyo hadal-haynta dadweynaha. Waxaana jiray tuhun laga muujinayay siyaasiyiin ganacsato ah oo ku dhow xukuumadda in ay u ololaynayeen in hoos loo dhigo badeecdooyinka ka imanaya Berbera gaar ahaan Kunteenaradda.